Qarax dhimasho sababay oo ka dhacay Addis Ababa - Caasimada Online
Home Warar Qarax dhimasho sababay oo ka dhacay Addis Ababa
Qarax dhimasho sababay oo ka dhacay Addis Ababa
Addis Ababa (Caasimada Online) – Saddex qof ayaa Axadda maanta ah ku dhimatay markii bambo meel looga tagay ay ku qaraxday caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa, sida ay ku warameyso wakaaladda wararka ee dowladda.
Wakaaladda ayaa warisay in qaraxu uu ka dhacay deegaanka Lideta oo u dhow bartamaha caasimadda, iyadoo intaa ku dartay in qaraxa ay ku dhinteen saddex qof ayna ku dhaawacmeen shan kale.
Qaraxa ayaa dhacay xilli uu gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi muddo lix toddobaad ah ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada federaalka iyo ururla TPLF, laakiin ma jirto wax tilmaamaya in uu xiriir ka dhexeeyo qaraxa iyo colaadda gobolkaasi.
“Waxaa socda baaritaan la xiriira qaraxa, shacabkana waa lala wadaagi doonaa marka uu baaritaanku dhamaado,” ayay wakaaladdu warisay.
Tan iyo markii xukuumadda Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed ay 4-tii November duullaanka ku qaadday gobolka waqooyiga ku yaalla ee Tigray, waxaa jiray dhowr qarax oo yar yar oo ka dhacay magaalada Addis Ababa.
Booliska federaalka ayaa ku eedeeyay qaraxyada qaar kooxda TPLF, laakiin ma aysan keenin caddeymo ay ku taageerayaan sheegashadooda.